डाक्टरहरू भन्दछन् यी खानेकुराको सेवन गर्नाले ९० प्रतिशत रोग लाग्नेछैन - पलपलका खबर
आजभोली हाम्रो खानपान र रहनसहनका कारण दैनिक थुप्रै मानिसहरू अनेकौँ रोगको सिकार बन्दैछन् । प्रस्तुत छ अमेरिका र युरोपका डाक्टरहरूको अध्ययन र अनुसन्धानको रिपोर्टले बताएअनुसार मुटु र शरीरका लागि अत्यन्तै स्वास्थ्यकर मानिएका खानेकुराहरू :
सुझाव: साल्मन वा अरु माछालाई हरिया ताजा मसलाका पात र सागसब्जीसँग फोइलमा बेक गर्नुहोस्। वा पकाइएको माछालाई सलाद र फिल गरेर खानुहोस्।
सुझाव: तेलको साटो पानीमा राखिएको डिब्बाबन्द टुना मुटुको लागि स्वस्थ्यकर हुन्छ।
सुझाव: यसको स्वाद लिन नतताइ पेलेको हुनुपर्छ र उत्पादनको ६ महिनाभित्र उपभोग गर्नु पर्छ।
सुझाव: ओखरको पनि तेल पाइन्छ, जसलाई सलादमा उपभोग गर्न सकिन्छ।
सुझाव: हलुका टोस्ट गरे अझ स्वादिलो हुन्छ।
सुझाव: फ्रिजमा राखेको चिसो एदाम्मेलाई उमाल्ने र तातै सर्भ गर्ने।
सुझाव: सखरखण्डको प्राकृतिक स्वाद बढाउन दालचिनीको धुलो छर्कने र कागती निचोर्ने।
सुझाव: मध्यम आकारको सुन्तलाम करिब ६२ क्यालोरी ऊर्जा र ३ ग्राम फाइबर पाइन्छ।
सुझाव: यसमाथि राखेर ग्रिल्ड मासु वा माछा सर्भ गर्न सकिन्छ। अथवा ओलिभको तेलमा लसुनसँग अलिक नरम नहुन्जेल हलुका भुट्ने।
सुझाव: भूसमात्र फालेको जौ सर्वाधिक पोषक हुन्छ। जौको च्याँख्लालाई भुटेर पनि खान सकिन्छ। भातका रुपमा वा अर्को परिकार बनाएर पनि खान सकिन्छ।
सुझाव: आलसको प्रचुर पोषण पाउन पिस्ने र धुलो अचार, तरकारी, दही वा स्यान्डविचमा छर्केर खाने।
(श्रोत : Article Nepal )
Previous Article के मानवले अर्काे शताब्दी देख्न पाउँछ ? मानिसको पनि कतै डायनोसरको जस्तै हविगत त हुने होइन ?
Next Article परदेशीको पर्खाइ !